ओली विदेश गएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न किन गए प्रचण्ड ? यस्तो रहेछ कारण — Sanchar Kendra
१ओम हस्पिटलका साहुको हर्कत: बाउको नाममा गाडीको पास बनाएर छोरोलाई ससुराली सरर
२नयाँ भेरएन्टले देश थला पर्न लागेपछि ओली सरकारले गुहार्यो अन्तराष्ट्रिय शक्ति
३भारतीयले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोमा हमला, ४२ गाडी तो’डफोड २७ भवनमा आ’गजनी
४नेपालको कोरोना महामारीबारे बल्ल बोल्यो डब्लूएचओ
५चीनले लगायो यस्तो प्रतिबन्ध
६भारतमा बढिरहेको कोरोना महामारीबारे बोल्यो डब्ल्युएचओ
७कोरोना सक्रमणका कारण कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पत्नीको निधन
८कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टसँग लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ५ खानेकुरा र ६ काइदा, आजै थाहा पाउनुहोस
९फेरि गयो ६ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
१०कोरोना संक्रमणबाट बच्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हरेक बिहान गर्नुहोस यस्ता व्यायामहरू
११अक्सिजन सिलिण्डर लिन ओमान उड्यो नेपाल एयरलाइन्सको विमान
१२अबेर राति सकिएको ओली-नेपाल वार्तामा के भयो सहमति ? भिम रावलले खोले यस्तो रहस्य
ओली विदेश गएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न किन गए प्रचण्ड ? यस्तो रहेछ कारण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएको ३ दिन नबित्दै सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष भेटवार्ता गरेको विषय बाहिर आएपछि सत्तारुढ दलका एक नेताले भने- ‘उहाँ राष्ट्रपति ज्यूले नेकपाका नेताको कार्यविभाजनका विषयमा चासो दिनुभएको थियो । त्यहि विषयमा कुराकानी भएको हुनुपर्छ ।’
उता सीतलनिवास स्रोतले भने नेकपाका नेताको कार्यविभाजन र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आइतबारदेखि नै सुरु भएको स्वास्थ्य उपचारका विषयमा कुराकानी भएको बताएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सतहमा आएको प्रधानमन्त्री ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको समस्याका बारेमा पनि प्रचण्डसँग चासो राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति–प्रचण्डबीच अन्य विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइए पनि बिषय सार्वजनिक गरिएकाे छैन् । यसअघि प्रचण्डले नीजि निवास खुमलटारमा नेता नेपालसँग सोही विषयमा कुराकानी गरेका थिए । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेरै सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारी र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको यो भेटघाटलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य उपचार शुक्रबारबाट थालिएको र अवस्था सामान्य रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियामार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार थालिएको जानकारी दिइन् । अरू केहीपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने बताए पनि उनले कतिपटक यस्तो गर्नुपर्छ भन्नेबारे केही खुलाइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौलामा एन्टीबडीको मात्रा बढेको छ ।
मिर्गौलामा यसरी बढेको एन्टीबडी कम गर्न प्लाज्मा फेरेसिस् उपचार पद्दति अपनाइन्छ । चिकित्सकका अनुसार, प्लाज्मा फेरेसिस उपचार विधि सुरुमा ३ पटकसम्म गरिन्छ । त्यसपछि पनि एन्टिबडीको मात्रा नघटेमा त्यसलाई बढाएर ६ पटकसम्म गर्नुपर्छ । शुक्रबार पहिलोपटक यो प्रक्रिया थालिएकाले उनलाई कतिपटकसम्म गर्नुपर्ने हो निश्चित भइसकेको छैन । मिर्गौलाको समस्याले पीडित प्रधानमन्त्री ओली चिकित्सकको सल्लाहअनुसार, गत बिहीबार सिंगापुर प्रस्थान गरेका थिए । उनको अहिले नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । विभिन्न प्रयोग र परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले उनको उपचारका लागि केही समय लाग्ने बताइएको छ ।
ओम हस्पिटलका साहुको हर्कत: बाउको नाममा गाडीको पास बनाएर छोरोलाई ससुराली सरर